holiday Archives | Save A tareenka
Home > fasaxa
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaan taxay ugu 5 Inta badan kaymaha quruxda badan ee Yurub kaliya waqtiga loogu talagalay Ciidaha Fasaxa Ciida! caado The fasax ka sugayeen inta badan ku caashaqay safarka waa xeebta. Laakiin Yurub waxay leedahay waddo ka badan xeeb si loo baadho. Join us as we take a stomp…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo jiilaalka oo ku saabsan si loo soo afjaro waa iyo xagaaga la garaacay on albaabbada iyo tani waa markii ugu marka aad la qorsheeyo fasaxyada aad soo socda. Dhammaanteen waxaan raadineynaa habka kharash-ku-ool ah ee socdaalka iyo haddii aad raadineyso habka ugu fiican…
5 Dhibco Of Interest Ma laga yaabaa in aad ka ogaato In South Africa
by Ivy Oliver
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo South Africa waa dal aad u kacsan, kala duwanaanta, iyo muhiimadda dhaqanka hodanka ah. Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow inay 17 milyan oo dalxiisayaal u safray Koonfur Afrika sannadkii la soo dhaafay oo keliya, iyo tiro ka mid ah in ay u badan tahay bixi doona sanadkan tani waa. Waa meel qurux badan…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waayo dal yar, Belgium ayaa ay qayb caddaalad ah safarada tareen fiican la badan hortiisa la yaab leh si ay u arkaan. xeebta Belgian waa hab fiican in aad isku dejiso oo wuxuu ku raaxaysan qorraxda iyo 65 km xeebaha, waxaa jira waxqabadyo badan oo xiiso leh oo dhinaca badda ah…